Daawo Sawirro: Maxaad ka taqaan dalka kaliya caalamka ee dadkiisa ka mamnuucay Cabista Sigaarka? | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawirro: Maxaad ka taqaan dalka kaliya caalamka ee dadkiisa ka mamnuucay Cabista Sigaarka?
Daawo Sawirro: Maxaad ka taqaan dalka kaliya caalamka ee dadkiisa ka mamnuucay Cabista Sigaarka?
Arintan ayaa keentay in inta badan dadkii sigaarka cabi jiray ay iska joojiyaan, kuwa weli sida dhuumaaleysiga ah u cabana ayaa iyaga waxay qarka u saaran yihiin iney qaadaan talaabadaas oo kale silica iyo rafaadka ay ku qabaan awgeed.
Go’aankaan ayaana ka dhigan in dalka Turkmenistan aan lagu arki doonin qof sigaar cabo marka la gaaro sanadka 2025 ka, booliska dalkaas ayaana sameeya howlgalo iyo dabagal joogto ah oo ku aadan sigaarka iyagoo soo xira cid waliba oo ay ku tuhmaan inay isticmaasho sigaarka.
Turkmenistan – Ashgabat: view from the Arch of Neutrality – looking SW towards the Kopet Dag mountain range – photo by G.Karamyanc
Previous PostXaalado kacsanaan ah oo ka jira Garowe iyo Boosaaso, Ciidamo gadoodsan oo soo galay Gudaha Magaaloyinka Daawo Sawirro! Next PostNabadoon soo bandhigay Xog ay dhibsadeen Puntland oo la xiray, Maamulka Putland ayaa dhalinyaro xoogsata ku qasbay inay sheegaatn Danbi aysan galin!